रविकाे बारेमा भाेली फै*सला हुदै, उनकाे समर्थनमा हुनेले एक एक शेयर गर्दै भगवान सँग प्राथना गराै !! – नेपाली सूर्य
September 18, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on रविकाे बारेमा भाेली फै*सला हुदै, उनकाे समर्थनमा हुनेले एक एक शेयर गर्दै भगवान सँग प्राथना गराै !!
काठमाडौं : पत्रकार सालि*कराम पुडा*सैनीको आत्मह*त्यामा दुरु*त्साहन गरेको आरो*पमा अदाल*तमा मु*द्धा खेपिरहेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको अर्को मु*द्धाको सुनु*वाई भोली विहिबार उ*च्च अदालतमा हुँदैछ । उच्च अदालतको आदेश के हुन्छ त्यसले लामिछानेको आगामी यात्रा तय हुनेछ ।
उच्च अदालतले र्पुप*क्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो भने लामिछानेको दशै का*रागारमा हुनेछ । जिल्ला अदालत चितवनको आदेश*लाई सदर गर्याे भने उनले बाहिरै बसेर मु*द्धा लड्न पाउनेछन् भने संचारकर्ममा पनि कृयाशील हुन सक्नेछन् ।
उता लामिछाने १० दिन हिरा*सतमा बस्दाखेरी निकै चर्चामा रहेका ज्ञानेन्द्र शाही आफू थु*निदा कसैले पनि नबोलेपछि आक्रोशित बनेका छन् । राजावादी पहिचान बनाउदै बर्तमान सरकार र व्यवस्थामाथि नै चर्को अभिव्यक्ति दिदै हिडेका शाहीले आफ्ना निकट अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने लगायतका व्यक्तिहरुसँग आफूलाई पर्दा रवि र रविका समर्थकहरु मौन बसेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । रविका लागि आफूले ज्या*नको बाजी लगाएको भन्दै आफूलाई पर्दा रवि मौ*न बसेकोमा उनको चि*त्त दुखाई छ ।
पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दुव्र्य*वहार गरेदेखि शाही तना*वमै छन् । पत्रकार पुडा*सैनी आत्मह*त्यामामा थुनामा रहदा रविको पक्षमा काठमाडौं देखी चितवनसम्म तताएका उनै शाही अहिले तनावमा हुँदा रवि भने भुमिगत शैलीमा मौ*न छन् ।
रविलाई छु*टाउँन बिभिन्न ठाउँको सभा, र्याली तथा कार्यक्रममा सहभागि हुँदै शाहीले सरकार बिरुद्ध चर्का नारा लगाए । रवि निर्दोष छन, थुनामा राख्न पाईदैन भन्दै सडकमा उत्रेका शाहीलाई अहिले रविले वास्ता नगरेपछि रविसँग सन्किएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटको राष्ट्रिय युवा संघले शाहीलाई बिभिन्न जिल्लामा प्रबेश नि*षेध गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
आफैले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लफडा सिर्जना भएर तना*वग्रस्त बन्न पुगेपछि एक रात प्रहरी हि*रासतमा विताएका शाही अहिले त*नावमा मात्र छैनन् अर्धभूमिगत शैलीमा बसेका छन् । नेपालगंजमा मन्त्री भट्टराईसंग अ*भद्र शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै उनको चौ*तर्फी आलो*चना भईरहेको छ ।
चितवनमा भाषण गर्दा संसारै आफ्नो ठानेका शाही अहिले आफ्नो पक्षमा खासै समर्थक नदेखेपछि उनलाई प*छुतो लागि रहेको छ । रवि थुनामा हुँदा आफूले सडक तताए पनि आफ्ना लागि रविले एकशब्द नबोल्दा चित्त दुखेको आफू निकटस्तसंग दुखेसे पोख्ने गरेका छन् ।
अब भ्र’ष्टाचार वि’रोधी अभियान चलाइन्छ – प्रधानमन्त्री ओली
फूटबल खेल्दा-खेल्दै परेको चट्याङले यसरी खेलाडीलाई मैदानमै लडायो (भिडियो)
August 1, 2021 August 1, 2021 Nepali Surya
नागरिकता बनाउन आएकी छोरीमाथि खुर्पा प्रहार गरी गम्भीर बनाउने बाबु प्रहरी नियन्त्रणमा…..